Zvekuvanzika mutemo | Art sens - mazano eimba nebindu
Ruzivo rwekuvanzika kweruzivo
Art Sense 'Kuzvidavirira kune Yakavanzika
Art Sense inoremekedza kuvanzika kwevashanyi vewebsite yako uye yakazvipira kuchengetedza kuvanzika kweruzivo rwako online. Kune yeruzivo rwega rwunopihwa, kuedza kwese kuchaitwa kurishandisa chete uye nenzira yaunosarudza.
Ichi chirevo chekuvanzika chinotsanangura zviitwa zveArt Sense zvine chekuita nekuvanzika kwepamhepo uye chinotsanangura nzira iyo ruzivo runounganidzwa uye kushandiswa. Iyo inotsanangurawo matanho ekuchengetedza akatorwa kuitira kuve nechokwadi chekuvanzika.
Coordinates yeArt Sense
Kana iwe uine chero mibvunzo kana kunetsekana maererano nekuvanzika kweruzivo kana uchishandisa iyi webhusaiti, nyorera ku: office@art-siture.com
Kuzivikanwa paunenge uchitsvaga saiti
Iwe unokwanisa kuwana webhusaiti yeArt Sense uye unogona kuiona pasina kuburitsa ruzivo rwako. Webhu sevha dzinogona kurekodha mamwe mashoko nezvewebhu rako kubhurawuza. Kana urwu mhando yeruzivo rwatounganidzwa, ndepekugadzira masvomhu mhando zvichienderana nehuwandu hwekushanya kwesayiti, peji peji, kushanya kwapakati uye humwe huwandu hwehuwandu hwezviitiko, kwete nechinangwa chekuunganidza yako pachako data.
Unganidzo yeruzivo rwevanhu
Saiti iyi haisi kuunganidza ruzivo rwevanhu nezvewe pasina ruzivo rwako. Art Sense haitsvaki ruzivo kubva kune vashanyi vanobva kune zvimwe zviwanikwa, senge marejista eruzhinji nemasangano uye / kana masangano akazvimirira.
Kushandiswa kwemashoko pachako
Imwe yeruzivo iwe yaunopa ingasabatwe seyako. Semuenzaniso, iwe unogona kusarudza kupa ruzivo rwusingadiwe neArt Senses. Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nemafomu ekutaura kana mamwe maitiro akafanana akafanana. Ndokumbira utarise kuti Art Sense inokoshesa ruzivo rwakadai kupihwa pasina kukumbira uye nokudaro ingatorerwe seyakavanzika.
Kupa ruzivo rwevanhu pachako kune vechitatu mapato
Art Sense ndiye ega muridzi wega ruzivo, kana aripo. Art Sense haizotengese kana kuendesa iyi ruzivo kune wechitatu mapato.
Ruzivo rwuripo ruchapihwa kune wechitatu mapato uye chete zvichiteerana nemutemo zvakatemerwa, zviri pamutemo matanho kana mukukumbira kweyemutemo mutumbi.
Kuchinjana kwemashoko pakati pevashanyi
Iyo Art Sense webhusaiti haina basa uye haina kutarisa kuchinjana kwemashoko pakati pevashanyi kune iyo kuburikidza nekushandisa mafomu ekutaura uye / kana kushandiswa.
Kuchengeta Ruzivo pakombuta yako - Makuki
Paunowana webhusaiti iyi, zvinogona kunge zvichitarisirwa kuchengetedza mamwe ruzivo pakombuta yako. Kazhinji, iyi mhando yeruzivo inotsanangurwa semakuki. Iyi ruzivo inobatsira kuvandudza kufamba uye kushanda. Mazhinji mabhurawuza eInternet anotendera iwe kuti ubvise makuki, vhara makuki ese, kana kutumira yambiro usati uchengetedza makuki. Ndokumbira utarise kuti kana ukaramba makuki, basa re webhusaiti iri rinogona kudzikiswa.
Kuki ndiyo chidimbu chidiki chemavara anotumirwa kune browser rako kubva kuwebhu yaunoshanyira. Iyo inobatsira saiti kuyeuka ruzivo nezve kushanya kwako, senge mutauro wako waunofarira uye mamwe marongero. Izvi zvinogona kuita kuti kushanya kwako kunotevera kuve nyore uye kuita kuti saiti iwedzere kukubatsira iwe. Makuki anoita basa rakakosha. Pasina ivo, kushamwaridzana newebhu zvaisanyanya kugutsa.
Art Sense inoshandisa zvigadzirwa zveGoogle uye Google inoshandisa makuki nekuda kwezvikonzero zvakawanda - semuenzaniso, kuyeuka zvaunoda SafeSearch, kuita kuti vashambadziro vaunoona vawedzere kwauri, kuverenga nhamba yevashanyi peji, kukubatsira kusaina masevhisi uye chengetedza ruzivo rwako.
Iwe unogona kuona rondedzero ye mhando dzemakuki anoshandiswa neGoogle, uye dzidza maitiro ekuvashandisa mukati kushambadzira. The Dzidziso Yakavanzika Google inotsanangura kuti kuvanzika kwako kunochengetedzwa nekushandiswa kwaGoogle nemakuki uye nerumwe ruzivo.
Dziviriro yeruzivo rwevanhu
Art Sense inotora matanho akakodzera ekudzivirira ese data yakagamuchirwa kubva kune vashanyi vepamhepo kubva pamhepo isiri iyo yekushandisa uye kushandisa, kuitira kuti ive nechokwadi chekuvanzika kweruzivo, matanho ekuchengetedza anofanirwa kuongororwa nguva nenguva.
Art Sense haizochengetedze ruzivo rwemunhu, kana iripo, kwenguva yakareba kupfuura iyo iri madikanwa kune chinangwa icho chaakawana.
Iyi webhusaiti inogona kuve nehukama kune mamwe mawebhusaiti anochengetwa neyechitatu mapato. Art Sense haina chekuita nekuvanzika kweruzivo kana zvimwe zviitiko zvewechitatu-bato remawebhusaiti, uye haina mhosva kune zvakanyorwa zvemasaiti zvakabatana. Mushandisi anoshandisa pfuma iyi panjodzi yake. Zvinokurudzirwa kuti uverenge uye unzwisise zvakavanzika zvirevo zvesaiti idzi.
Kushandiswa zvisirizvo kweruzivo rwevanhu
Art Sense inogona kugadzirisa uye kuchengeta ruzivo pamusoro pako iyo isina kupihwa newe pachako. Kana iwe uine data nezvekushungurudzwa kwakadaro kwedatha, ndapota tizivisewo ne email: office@art-siture.com
Shanduko kune ino Chengetedzwa
Art Sense inochengetedza kodzero yekugadzirisa iyi yeChakavanzika nguva chero nguva. Nekudaro, zvinokurudzirwa kuti utarise nguva dzose Iwo mutemo